Lungisa ikhompyuter evulwayo kodwa kungabonakali nto kwiscreen- Ikkaro
yokuqalisa >> Ukulungiswa >> Ikhompyuter yam iyajika kodwa akukho nto ibonakala kwiscreen
Nantsi into eyenzekileyo kum kwi-PC yam yeminyaka elithoba. Ikhompyuter iyaqala kodwa akukho nto ibonakala kwiscreen. Ndicacisa indlela yokufumanisa impazamo ukufumanisa ukuba yintoni esilelayo, kuba kubonakala ngathi yimpazamo eqhelekileyo.
Ukusilela kuhlala kuvela kwenye yezi ndawo zintathu:
Okokuqala jonga ukuba awunayo i-USB, i-cd, i-smartphone, iwotshi, i-fitbit, okanye enye i-hardware exhunywe kwikhompyuter. Ukuba unento exhunyiwe ngaphandle kwemouse, ikhibhodi kunye nezithethi, yisuse kwaye uzame ukuqala kwakhona. Amaxesha amaninzi silibale into edityanisiweyo kwaye ukuba sine-BIOS emiselweyo yokuqalisa kwi-disk yangaphandle izama ukuyenza kwaye inike impazamo.
Ukuba uyaluthanda olu hlobo lokulungiswa, jonga eliqhinga vula i-smartphone enesikrini esaphukileyo.
Sijonga ukuba isikrini siyasebenza. Kuvakala ngathi yinkomo yenkomo, kodwa yinto ekufuneka ilahliwe. Kuba ukusilela esixoxe ngako, ikhompyuter iyasebenza, iyaqala, ke kunokuba yonke into isebenza kakuhle kodwa isikrini sonakalisiwe.
Ukuvavanya kulula kakhulu, qhagamshela ilaptop okanye esinye isixhobo esine-HDMI okanye ukuba ukubek'esweni kunomabonwakude, zama ukubona ukuba iyasebenza na. Ngokwesiqhelo siya kufumana umyalezo ongabhaliswanga, kwaye ngaloo nto sele siyazi ukuba impazamo yesikrini ikhutshiwe.
Ukuba nayiphi imodyuli ye-RAM oyidibanisileyo yonakele okanye ayixhumekanga kakuhle, kuba iphumile, kuba kukho ukungcola kwaye aywenzi nonxibelelwano oluhle, nathi sinokuyifumana le ngxaki.
Coca uthuli, eyona nto inomoya oxineneyo kwaye ukuba siphumelele ngokuxubha okungahambelaniyo. Kodwa ngebrashi eqhelekileyo awuyi kuba nangxaki.
Guqula iimodyuli zokubeka. Zizame nganye nganye ukubona ukuba ziyasilela.
Ikhadi lemizobo okanye iGPU
Inketho elandelayo yigrafu. Kuya kufuneka uyisuse, ucoce unxibelelwano ngebrashi kwaye uphinde uvavanye ukuba iyasebenza.
Ngaphambi kokuba uthenge omnye umzobo, cela umhlobo wakho umdala ukuze uqiniseke ukuba yeyona nto iphosakeleyo.
Uyilungisa njani igrafu
Nangona ayisiyiyo injongo yeli nqaku ndishiya amanqaku amancinci.
Ukuba yonakele, coca ifeni kunye neheatsink kakuhle, isuse kwaye utshintshe unamathiselo olushushu. Jonga ukuba kukho icandelo elikwimeko embi elinokutshintsha okanye ukuthengisa okungalunganga.
Kwaye ekugqibeleni ukuba asinakuyenza isebenze Singacinga ngokwenza ukuhambisa kwakhona endizakufundisa ukuyenza kwelinye inqaku.
Ukuchongwa kweMpazamo yomama webhodi eneebhiphu
Iibhodi zee-mama zine-diagnostic yeempazamo abasixelela ngayo ukuba ayisebenzi. Ingabonwa ngee-LEDs kwiqhosha lamandla, nangona eyona nto ilula inee-beeps, isandi esikhupha xa kukho ingxaki.
Ukuba yonke into ihamba kakuhle kwi-PC yethu, i-beep iviwe kwaye ikhompyuter iyaqhubeka nokusebenza.
Ukuba kukho into engaphumeleliyo, ikhala ngokolandelelwano, ii-beep ezi-2, ezi-2 ezinde nezinye ezimfutshane, ii-beeps ezi-3, njl.
Ngoku, uninzi lwabantu lukhangela i-Intanethi ukufumanisa isifo kwaye kwiphepha ngalinye bafumana iintsingiselo ezahlukeneyo zeebhip. Kungenxa yokuba kuxhomekeke kwi-BIOS onayo.
Inkqubo echanekileyo yile:
Fumanisa ukuba yeyiphi ibhodi yomama onayo. Ukujonga kuyo, okanye ngenxa yokuba unebhokisi egciniweyo okanye i-invoyisi ethile yokuthenga.
Nje ukuba unayo, khuphela iNcwadana yokufuna ipleyiti kuGoogle (imodeli yefayile yencwadana yefayile: pdf)
Emva koko fumana ukuba ikhowudi yempazamo ikuphi. Ndikhangela ngaphakathi kwepdf ngegama "beep" ngenxa yoko ndihlala ndiyifumana kwimizuzwana embalwa.
Ngale ndlela uqinisekisa ukuba uxilongo olukhuselekileyo oluhambelana nempazamo yakho
Ngamanye amaxesha, njengoko kunjalo kwimeko yam, ikhompyuter ayenzi nasiphi na isandi kuba ayinayo i-buzzer efakiweyo. Iipleyiti ezininzi zidityanisiwe kodwa ezinye azidibanisi, zeza ebhokisini kwaye ndiyigcinile.
Ukuba kwenzeka into efanayo kuwe, yikhangele, cela umhlobo wakho ukuba uthenge enye okanye uyithenge esoloko ilungile ukuba nayo okanye uyishiye inyuswe kwiPC. ukwazi apho uyibeka khona, jonga kwipleyiti apho ithi khona ibuzzer.
Hlaziya imonitha endala kwaye ukhuphe i-flyback
Ungasifaka njani isicelo se-APK kwi-Android
izigaba Ukulungiswa Ukuhamba kwetikiti
3 Ikhadi lemizobo okanye iGPU
3.1 Uyilungisa njani igrafu
4 Ukuchongwa kweMpazamo yomama webhodi eneebhiphu